ရယ်စရာ၊ရွှင်စရာ ~ ကိုထွေး(နည်းပညာ)
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့ အစ်ကိုတွေအစ်မတွေ အားလုံး ဟာသလေးတွေ ဖတ်ပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ.....။
ကျောင်းတက်ချိန် နောက်ကျမှ ကျောင်းသို့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ရောက်လာ၏။ ထိုအခါ အလွန်စိုးရိမ် တက်သော ဆရာက
ဆရာ ။ ဘာဖြစ်လို့ ကျောင်းနောက်ကျတာလဲ
ကျောင်းသား ။ လမ်းမှာ ရိုက်လုတာ ခံရလို့ပါ ဆရာ
ဆရာ ။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေကွာ…..ဒါနဲ့ ဘာတွေများ ပါသွားသေးလဲ
ကျောင်းသား ။ ကျွန်တော့် အိမ်စာတွေတော့ ပါသွားတယ် ဆရာ
သူငယ်ချင်း မင်း…..ဘယ်မြို့ကမယ် ၊ ဘယ်တိုင်းကမယ် ၊ မယ်ဗမာ ၊ မယ်ကမ္ဘာတို့ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား
ငါမနေ့က လမ်းမှာ ကောင်မလေးချောချောတွေ့လို့ စကားလိုက်ပြောရင်းနဲ့ နာမည်မေးလိုက်တော့ သူဘာမယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်ကွ။ မင်း..သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်လားကွ….” ဘာမယ်တဲ့တုန်း ”
သူ့ဘေးကပ်လျက်ခုံမှာ ကြက်တူရွေးတကောင် ထိုင်နေတာကိုး…
ဒီလိုနဲ့လေယာဉ်ထွက်လာလို့မကြာခင်မှာဘဲ အစားအသောက်တွေ စတင်ကျွေးမွေးတော့ လေယာဉ်မယ်လေးက မေးလာတယ်…
“အစာမစားမီ ဘာများ သောက်ချင်ပါသလဲရှင်”
ကိုထုံက… “ကော်ဖီတစ်ခွက် ပေးပါ” လို့ မှာတယ်။
ကြက်တူရွေးက…”ငါ့ အတွက် ဝီစကီတစ်ခွက်ပေးစမ်း ကောင်မ…ကြားလား”…တဲ့။
ခဏနေတော့ ကြက်တူရွေးက ထပ်မှာပြန်တယ်…”ဝီစကီတခွက် ထပ်ယူပေးစမ်း…သောက်ရူးမလေး”………..
ဒီတခါလည်း ကော်ဖီက ပါမလာပြန်ဘူး…….
ကိုထုံလည်း ကြက်တူရွေးလမ်းစဉ်လိုက်ပြီးမှာမှရမယ်လို့ တွေးပြီး……
“ငါ့ကော်ဖီကိုမြန်မြန်သွားယူစမ်း ဝက်မလေး၊ မဟုတ်ရင် နင့်ကို ကန်မိတော့မယ်”
ကိုထုံ နဲ့ ကြက်တူရွေးကို ဖမ်းချုပ်ခေါ်လာပြီး အရေးပေါ်အပေါက်ကနေ လေယာဉ်အပြင်ကို ပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်….
ဒီမှာတင် ကြက်တူရွေးက ကိုထုံ့ ကို လှမ်းပြောတယ်… …. …
“မင်းက ပျံလည်းမပျံတတ်ဘဲနဲ့ Complain တယ်များကိုးကွ”….တဲ့။
သင်ခန်းစာ။ ။ မပျံတတ်ရင် complain မတက်ပါနဲ့ ကိုယ့်လူတို့ – အဟိ။
ကင်းလှည့်ရဲကားတစ်စီးဟာ မီတာလွန် မောင်းနေတဲ့ကားနောက်ကို အမှီလိုက်ပြီး ကားဒရိုင်ဘာကို လမ်းဘေးဆင်းဖို့ရပ်ဖို့
အချက်ပြတယ်။ “အစ်မကြီး- ခင်ဗျား မီတာ ၉၀ နှုန်းနဲ့မောင်းနေတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီး ဝမ်းနည်းတစ်ကြီးဖြစ်ရတာထက် ကြိုကြိုတင်
တင် အန္တရာယ်ကင်းအောင်နေတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား” မော်တော်ပီကယ်က မေးတယ်။
” တော်စမ်းပါရှင်” သူမက အားကျမခံ “ရှင်တို့လည်း မီတာ ၉၀ နှုန်းနဲ့ မောင်းခဲ့တာပဲ၊ ဒါကြောင့် ကျွန်မကို အမှီလိုက်နိုင်တာ
ဟိုတယ် ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်းတွေကို မန်နေဂျာက မျက်စိလျင်ဖို့၊ တိကျဖို့ သွန်သင်ဆုံးမရင်း “ဥပမာကွာ … ခရီးသည် တစ်ယောက်လာရင် သူ့ ခရီးဆောင်အိတ်မှာ နာမည် ကပ်ထားတတ်တဲ့ ကတ်ပြားကို ဖတ်ပြီး မင်းတို့
နှုတ်ဆက်လို့ရတယ်။ ဟယ်လို မစ္စတာ စမစ် ..ဘာညာပေါ့။ သူ့ နာမည်ကို ကိုယ်က
သတိပြုမိတယ်ဆိုတာသိရင် သူလည်း အံ့ဩ
ဒါနဲ့ နောက်နေ့ ဧည့်သည်လာတော့ ဧည့်သည်ရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ကတ်ပြားကိုကြည့်ပြီး တိုနီက ဒီလိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။
“မင်္ဂလာပါ မစ္စ သားရေအစစ်.. ကြိုဆိုပါတယ်”
တစ်ခါက လယ်ထဲကပြန်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် … ဖိုးသူတော်ကြီးစားဖို့ဆိုပြီး ဂဏန်းတွေလက်ဆောင်ပေးသွားပါတယ်…။ ဆိုးတာက..ကျွပ်ကျွပ်အိတ်ကိုဖြည်ကြည့်တော့ ..ဂဏန်းတွေက အ၇ှင်တွေ….။ရွှံ.တွေသဲတွေထဲမှာ လှုပ်စိလှုပ်စိဖြစ်နေတဲ့ ဂဏန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ဖိုးသူတော်ကြီး မသတ်ရဲဘူး။စားတော့စားချင်တယ်..ငရဲကြီးမှာလည်းကြောက်တယ်ပေါ့…။ခဏနေတော့ အကြံရပြီး .ဒန်အိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့ရေနွေးတည်တယ် ။ရေနွေးဆူတော့ တုတ်တစ်ချောင်းကိုဒန်အိုးပေါ် ကန့်လန့်တင်ပြီး ဂဏန်းတွေကိုဒီဘက်ကနေ ဟိုဘက်ကိုကူးခိုင်းတယ်။အောက်ကိုပြုတ်ကျတဲ့ အကောင်ကတော့ပြုတ်ပြီးသားပေါ့။အောင်မြင်စွာကူးနိုင်တဲ့ကောင်ကို ချမ်းသာပေးတယ်ပေါ့လေ။သူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပဲ.။ဒါနဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်အလှည့်ရောက်ရော…
ဂဏန်းကြီးက တုတ်ချောင်းပေါ်ကနေ တစ်ဖက်ကို အောင်မြင်စွာရောက်သွားပါလေရော…အဲ့ဒီတော့ဖိုးသူတော်က
“မင်းကအကောင်ကြီးတော့ နှစ်ခါလျှောက်” တဲ့…။
အပျော်တမ်းပြိုင်မြင်းမွေးသောလူတစ်ယောက်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့်လာတွေ့ သည်။
မြင်းမွေးသူ။ ။ ကျတော့် မြင်းလေးဟာ သွက်သွက်လက်လက်မရှိဘဲ အမြဲမှိုင်နေတယ် ဆရာ
ဆရာဝန် ။ ။ခင်ဗျားမြင်းကို သွက်သွက်လက်လက်ဖြစ်စေချင်ရင် ဒီဖယောင်းတိုင်အပြာကို မြင်းရဲ့စအိုထဲထည့်လိုက်ပါ။
ပိုမြန်စေချင်ရင်တော့ ဒီဖယောင်းတိုင် အနီ ထည့်လိုက်ပါ။ ဒုံးဆိုင်းပြီးတော့ကို ပြေးလိမ့်မယ်။
ဖယောင်းတိုင် နှစ်ချောင်းကို ယူပြီးထိုလူပြန်သွားသည်။နှစ်ပတ်ခန့်ကြာသောအခါ ဆရာဝန် နှင့် မြင်းမွေးသူ တစ်နေရာတွင်ပြန်ဆုံ
ဆရာဝန်။ ။ခင်ဗျားမြင်း ဘယ်လိုလဲဗျ….
မြင်းမွေးသူ။ ။ဟာ ဆရာရယ် ….အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကျနော် ဖယောင်းတိုင်အပြာကို မြင်းရဲ့ စအိုထဲထည့်လိုက်တာ
တစ်ခါတည်း ထွက်ပြေးတော့တာပဲ မြို့ပြင်ကို….
ဆရာဝန်။ ။ဟာ ခင်ဗျားဘယ်လိုပြန်ဖမ်းလဲ……
မြင်းမွေးသူ။ ။ဖယောင်းတိုင် အနီကို ကျနော့် ဖင်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်လေ….မြို့ပြင်မရောက်ခင်ပြန်မိတယ်…..။
ပြီးတော့ ဘုရားရှေ့ သွားပြီး ဆွမ်းတော် ကပ်တယ်။ အတီးတစ်ယောက် ဘုရားရှေ့ မှာ ဘာတွေ ရွတ်ဆိုပြီး
သူတောင်းစားတစ်ယောက် လမ်းဘေးမှာ ခွက်ကလေးတစ်လုံးချပြီး ကိုယ်အမူအရာ လက်အမူအရာပြပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေတယ်။
လို့ ရေးထားတဲ့ စာရွက်ကြီးကို ကပ်ထားတယ်။
လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ယောက်က စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ သနားစရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး
ပိုက်ဆံသွားပေးတယ်။ ပြီးတော့ သူက သူတောင်းစားကို မေးလိုက်တယ်။
“ခင်များ စကားမပြောတတ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ”
သူတောင်းစားပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကြောင့် အဲဒီလူခင်မျာ..ပိုးလို့ ပက်လက် လန်သွားသတဲ့ ။
“ကျနော် မွေးကထဲက စကားမပြောတတ်တာပါ” တဲ့ ခင်ဗျား။ ။
နိုင်ငံရပ်ခြားက တိုးရစ်စ် တစ်ယောက်ဟာ ဒေလီ နဲ့ အက်ဂရာမှာ သူ့ကို လိုက်ပို့ဖို့ အိန္ဒိယ ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ယောက်ကို ငှားပါတယ်။ ဒေလီက ခံတပ်နီကြီး ကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဗိသုကာ လက်ရာတွေကို သဘောကျလို့ ဘယ်နှစ်နှစ် ကြာအောင် ဆောက်ရသလဲ လို့မေးပါတယ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်က “နှစ် ၂၀ ကြာပါတယ်။” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
“မင်းတို့ အိန္ဒိယက ကောင်တွေ ငပျင်းတွေပဲ။ ငါတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒါမျိုးဆောက်ရင် ၅ နှစ်နဲ့ ပြီးတယ်။” လို့ တိုးရစ်စ်က ပြန်ပြောပါတယ်။
အက်ဂရာကို ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ တာ့ဂ်ျမဟာရ် ဂူသင်္ချိုင်းကြီးရဲ့ အလှအပတွေကို သဘောကျလို့ ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာအောင် ဆောက်ရသလဲလို့ မေးပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ “ဆယ်နှစ်ပဲ ကြာပါတယ်။” လို့ ဧည့်လမ်းညွှန်က ပြန်ဖြေပါတယ်။
“မင်းတို့ အိန္ဒိယကကောင်တွေ အလုပ်လုပ်တာ အတော်နှေးတာပဲ။ ငါတို့ဆီမှာ ဆိုရင် ဒီလို အဆောက်အဦးမျိုးကို ၂ နှစ်ခွဲနဲ့ ဆောက်လို့ ပြီးတယ်။” လို့ တိုးရစ်စ်က ပြောပြန်ပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တိုးရစ်စ်ဟာ သူသဘောကျသမျှ အဆောက်အဦးတိုင်းကို သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဆိုရင် အချိန် ၄ ပုံ ၁ပုံလောက် သုံးရင် ပြီးတယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ဟာ ဒေလီက ကူတပ် မိုင်နာ တာဝါကြီး ကို ရောက်လာပါတယ်။ တိုးရစ်က “ဒါဘာကြီးလဲ” လို့ မေးတော့ ဧည့်လမ်းညွှန်က “မသိဘူး။ မနေ့က ညနေကအထိတော့ ဒါကြီး မရှိသေးဘူး။” လို့ ပြန်ဖြေ လိုက်ပါတယ်။
ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်ဟာ ဘုရားကျောင်း အပြင်ဘက်မှာ ထိုင်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်း နေပါတယ်။ “ဘဂဝမ်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ဒီလူဆင်းရဲ ဗိုက်ပြည့်အောင် ပိုက်ဆံလေး နည်းနည်းလောက် မစကြပါ။ ဘဂဝမ်က ခင်ဗျားတို့ကို စောင့်ရှောက်ပါ လိမ့်မယ်။” လို့ သူက အော်ဟစ် နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘုရား လာရှိခိုးတဲ့ သူတွေက သူ့ကို ပိုက်ဆံ နည်းနည်းလေးပဲ ပေးကြပါတယ်။ စိတ်ပျက်လာတာနဲ့ သူတောင်းစားဟာ ဘုရားကျောင်းက ထွက်လာပြီး အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ထိုင်နေပါတယ်။ “ဘဂဝမ်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ တစ်ပြား နှစ်ပြားလောက် စွန့်ကြဲကြပါ။” လို့ သူက အော်ပါတယ်။ ဆိုင်ထဲကနေ မူးပြီး ထွက်လာတဲ့ သူတွေက ရူပီး ငွေတွေကို သူ့ခွက်ထဲကို ထည့်သွားကြပါတယ်။ ဘုရားကို ကျေးဇူးတင်လို့ သူတောင်းစားက ဒီလို ပြောပါတယ်။ “ဟေး ဘဂဝမ်။ ကျွန်ုပ်တော့ နားမလည် နိုင်တော့ဘူး။ အသင် ကျွန်ုပ်ကို ပေးတာ လိပ်စာက တစ်မျိုး။ နေတော့ အခြားတစ်နေရာ။ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ။”
ဆိုနုက မအိပ်ခင် ဆုတောင်းနေပါတယ်။
“ ဘုရားသခင်။ ကျေးဇူးပြုပြီး နေပယ်လ်ကို အီတလီရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်အောင် စောင်မတော်မူပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး စောင်မတော် မူပါ။”
“နေပါဦး။ မင်းက ဘာကိစ္စ နေပယ်လ် ကို အီတလီရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်စေချင်ရတာလဲ။” လို့ ဆိုနု ရဲ့ အမေက မေးပါတယ်။
“ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ ပထဝီ စာမေးပွဲမှာ အဲဒီလို ဖြေလိုက်လို့ပေါ့။” လို့ ဆိုနု က ပြန်ဖြေလိုက် ပါတယ်။
အရောင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ ကပ်စတန်မာကို ရိုင်းရိုင်းပျပျ ဆက်ဆံတဲ့အတွက် အလုပ် ထုတ်ခံရ ပါတယ်။ တစ်လလောက် ကြာတော့ အရောင်းမန်နေဂျာက သူ့ကို ရဲ အဝတ်အစားနဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“အော် ဘာနဂါ။ လက်စသပ်တော့ မင်းက ရဲအဖွဲ့ထဲ ဝင်လိုက်တာကိုး။” လို့ အရောင်းမန်နေဂျာက ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်တယ် ဆရာ။ ဒါ ကျွန်တော် တစ်ဘဝလုံး ရှာနေတဲ့ အလုပ်ပဲ။ ဒီအလုပ်မှာ ကပ်စတန်မာက အမြဲမှားတယ်။ (Customer is always wrong.)”
ဆက်သွယ်ရေး လက်ချာတစ်ခုမှာ ဆရာက မေးပါတယ်။
“အနီအောက် ရောင်ခြည် ဆက်သွယ်ရေး (Infrared Communication) က မကောင်းဘူး ဆိုတာ ဘယ်လို ဥပမာ ပြမလဲ။”
ရွှတ်နောက်နောက် ကျောင်းသားတစ်ယောက်က “အိန္ဒိယ လူမျိုးတွေကို ကြည့်ပါ ဆရာ။ သူတို့ နဖူးမှာ အနီစက်ကလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါ သူတို့ အချင်းချင်း Infrared နဲ့ ဆက်သွယ် နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖမ်းလို့ရတဲ့လှိုင်း (reception) က မကောင်းတော့ သူတို့ ခေါင်းတွေကို ခါနေရတယ်လေ။ အဲဒါမှ လှိုင်းမိမှာကိုး။” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဆရာက စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ “သူတို့တွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက အနီစက်က ရှိလာတာပဲ။ မင်းပြောသလိုဆို တသက်လုံး ဆက်သွယ်လို့ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေမှာပေါ့။” လို့ ပြန်တွယ် ပါတယ်။
ကျောင်းသားက “သူတို့ကို အပြာရောင် အစက် ပြောင်းတပ်ခိုင်းလိုက်ပါ ဆရာ။ အဆင်ပြေ သွားပါလိမ့်မယ်။ Bluetooth က Infrared ထက် သာပါတယ်။” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒါတွေအားလုံးကို ဘလော့ဂ် ပေါင်းစုံးမှ စုဆောင်းပြီး ကူးယူ တင်ပြထားပါသည်။
Posted in: ရယ်စရာလေးများ
Email တွေကို MP3 ဖိုင်ပြောင်းပြီးပို့လို့ရတဲ့ နေရာ
Time မဂ္ဂဇင်း၏၂၀၁၁အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံ ၁၁ ပုံ
၀င်းဒိုးXP ကို ၀င်းဒိုးမြန်မာပြောင်းသုံးကြည့်ရအောင်